गाँजा खेतीबाट खर्बौंको कमाई हुन्छ, यो विद्येयक पारित हुन्छ – सांसद तामाङ – Life Nepali
गाँजा खेतीबाट खर्बौंको कमाई हुन्छ, यो विद्येयक पारित हुन्छ – सांसद तामाङ
काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद तथा पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफूहरुले धेरै सोच र विचार गरेर नेपालमा गाँ’जा, खेति व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा प्राईभेट विल दर्ता गराएको स्पष्ट पारेका छन् । उक्त विद्येयक सर्वसम्मतीले पारित हुनेपनि उनले विश्वास दिलाएका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा सांसद तामाङले उक्त विद्येयक गैरसरकारी रूपमा दर्ता गरिएको सुनाउँदै नेपालमा गाँजा खेति खुल्ला गरिए नेपाली जनता तथा देश नै समृद्ध हुने पनि दाबी गरे ।
उनले भने,‘नेपालमा गाँजा त प्राकृतिक रुपमा नै उत्पादित वनस्पती हो । त्यसमा पनि यसमा औषधीय गुण हुन्छ । नेपालको गाँजा विश्वकै महँगो गाँजाको रुपमा बिक्रि हुन्छ ।’ उनले गाँजा खेति खुल्ला गरिए नेपाल र नेपालीहरु आयआर्जनको हिसाबले पनि धनी र समृद्ध हुने पटक–पटक विश्वास दिलाए । उनले थपे,‘गाँजा खेतिलाई वैधानिक बनाउन सकियो भने जनतामात्रै होईन, देशपनि समृद्ध हुन्छ । त्यही भएर हामीले संसदमा गैरसरकारी विद्येयकको रुपमा यसलाई दर्ता गराएका छौं ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि गाँजाको कारोबार अरबमा नभएर खरबौं रुपैयाँमा भैरहेको दृष्टान्त सुनाए । उनले भने,‘नेपालले पनि भोलि यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिनसक्छ ।’
उनले गाँजाको सेवनमात्रै नभएर यसको रेसाबाट कपडासमेत बन्ने गरेको पनि सुनाए । ‘गाँजाको रेसाबाट बन्ने कपडा त विश्वमै महँगो कपडाको रुपमा बिक्रि भैरहेका छन् ।’–उनले थपे,‘यसबाट बनेका कपडाहरुको विश्व बजारमा अत्यन्तै ठूलो माग छ । खासगरी गाँजाको रेस्साबाट बन्ने कपडाका कोटहरु त झनै महँगा छन् ।’ उनले गाँजामा औषधीय गुण भएकोले यसलाई रोक्न नहुने पनि तर्क गरे । तर, नेपालको हकमा यसको सेवनमा भने पूर्णतः कानून लागु हुनेपनि सचेत गराए । उनकाअनुसार २१ वर्ष पुगेकाहरुले चिकित्सको सुझावअनुसार सेवन गर्न सकिनेछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि गाँजालाई लागुऔषधमा नराखेको सुनाउँदै यसतर्फ नेपालले पनि ध्यान दिनुपर्ने तामाङको तर्क छ । उनले भने,‘संयुक्त राष्ट्रसंघले त आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुलाई पत्राचार नै गरेर गाँजा लागुऔषध नभएको कुरा स्पष्ट रुपमा भनिसकेको छ। त्यही भएर ४० भन्दा बढि राष्ट्रले त गाँजालाई वैधानिकता दिईसकेका छन् ।’ उनले विश्व प्रतिष्पर्धाको बजारमा पनि नेपालको गाँजा नम्वर एक हुनसक्ने दाबी गरे । आफूहरुले नेपालीलाई कुनै दुव्र्यसनीको शिकार बनाउनको लागि यो कुरा नगरेको पनि तामाङले स्पष्ट पारे । उनले थपे,‘गाँजाको उत्पादनमा पूर्ण छुट हुन्छ।
तर, सेवनको लागि कानून बनाउँछौं । र, चिकित्सको प्रेस्किप्नबिना सेवन गर्न दिनुहुँदैन्।’ तामाङले भोलि कसैले नियम तथा कानून उल्लंघन गरे एक वर्षसम्म जेल सजाय र एक लाखसम्म जरिवाना हुनेसमेतको व्यवस्था गर्न लागिएको सुनाए । उनले गाँजामा ४५० भन्दा बढि औषधीय गुण रहेको पनि सुनाए । उनले नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउनको लागि गाँजा खेति खुल्ला गर्दा उक्त योजना ‘गेम–चेन्जर’ हुनसक्नेपनि तर्क गरे । उनले विद्येयक शतप्रतिशत पारित हुने दाबी दोहोर्याए । तर, नेपालमा यो विद्येयक पारित भएपनि आफूहरुले सेवनकोलागि प्रोत्साहन नगरेको पनि उनको जिकिर थियो ।
उनले नेपालमा विदेशी पर्यटकहरुको लागि गाँजा सेवन खुल्ला गर्ने हो भने वर्षमा लाखमा नभएर करोडको संख्यामा विदेशी पर्यटकहरु आउनसक्नेपनि सम्भावना औंल्याए । यद्धपी यो विषय अहिले छलफलको पाटोमा नपरेको उनको स्विकारोक्ति थियो । उनले थपे,‘६० र ७० को दशकमा विदेशीहरु नेपाल गाँजा सेवनकैलागि आउँथे । अब भोलिको दिनमा यसलाई खुल्ला गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय यो पूनः छलफलको विषय बन्न सक्ला । म दाबाका साथ भन्छु, यदि विदेशीका लागि गाँजा खुल्ला गरियो भने नेपालले बेचेर भ्याउँदैन् ।’
नेपालकै आफ्ना उत्पादन खासगरी रोल्पा र जुम्लाका स्याउले बजार नपाएको अवस्थामा नेपालको गाँजाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउँछ भन्नेमा के ग्यारेन्टी छ ? भनेर एक पत्रकारले सोधेका प्रश्नमा पूर्वमन्त्री तामाङले भने,‘त्यो त हाम्रो मेकानिजमको कमजोरी हो । हामीले जुम्ला र रोल्पाका स्याउ काठमाडौं ल्याउनको लागि राम्रो संयन्त्र बनाउन सकेनौं । तर, काठमाडौंबाट रक्सी र बियरका बोटल कसरी त्यहाँ पुगेका छन् ? त म प्रश्न गर्न चाहन्छु । म भन्छु नेपालका स्याउले बजार पाउनुपर्छ ।’ उनले नेपालका यार्सा गुम्बाहरु नेपालमै बिक्रि, वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले संयुक्तराज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यमा गाँजा बेचेरै वार्षिक २४ खर्बको आम्दानी भएको सुनाउँदै नेपालमा पनि गाँजा खेतिको खुल्लाबाट लाभ लिन सकिने प्रचुर सम्भावना सुनाए । उनले भने,‘यो चर्चाको विषयमात्रै होईन, हामीले निकै मेहनत, अध्ययन तथा अनुशन्धान गरेर यो विषय ल्याएका हौं । यसभन्दा पहिले हामीले विज्ञ समूह, चिकित्सकहरुसँगपनि छलफल तथा परामर्श गरेका थियौं । वाग्मती प्रदेशबाट माननीय केशब स्थापितजीलाई यो विषयमा बोल्न लगाएर जनमत बुझेका थियौं । शीर्ष तथा प्रभावशाली नेताहरुसँगपनि हामीले यो विषय छड्के रुपमा राखेका थियौं ।
उहाँहरुले पनि यो राम्रो हो भन्नुएको थियो । केही माननीयहरुले विरोध गर्नु अलग कुरा हो । तर, प्रायः सबै माननीयज्यूहरुले यसमा सहमत जनाउनुभएको छ । यो विद्येयक पारित हुन्छ ।’ त्यस्तै, उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मिर्गौलाको पूनः प्रत्यारोपण नेपालमा गराएकोमा गर्व महशुस गर्दै अत्यन्तै सकारात्मक निर्णय गरेको भन्दै धन्यवाद दिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेका छन् । तामाङले आफू भोलि जस्तोसुकै ठूलो ओहादामा पुगेपनि उपचारको लागि देशबाहिर नजाने समेत प्रण गरे ।-रासस
Previous सांसद अक्कल बहादुर रावल ज’बरज’स्ती क’रणी गरेको आ’रोप प’क्राउ
Next नेपाल प्रहरीका ११ सय ७९ प्रहरी जवान हवल्दारमा बढुवा ! को का ? नामावली सुची सहित